रोचक Archives - Page 8 of9- Sadarline
Jul52018 by सदरलाइन संवाददाताNo Comments
प्रकाशित मितिः बिहिबार, असार २१, २०७५ |
नेपालमा असार पन्ध्रको धान दिवसमा नेताहरुका अनेक चर्तिकलाले अहिले सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन् । चुनावमा पनि नेताहरुले यस्तैखाले अनेक चटक देखाउँछन् । उता पाकिस्तानमा पनि नेताहरु के कम ? अहिले आम चुनावको सरगर्मी बढिरहेको बेला पाकिस्तानमा एकजना नेताले जनताको मन र भोट आफुतर्फ तान्नका लागि अनौठो जुक्ति निकालेका छन् । चुनाव नजिकिँदै जाँदा नेताहरु जनताका घरदैलो पुगेर भोट मागिरहेका बेला एकजना स्वतन्त्र उ
Jun102018 by सदरलाइन संवाददाताNo Comments
प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ २७, २०७५ |
सोसल मिडियाको यो जमानामा कहिले के भाइरल हुन्छ ? भन्ने कुराको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दछ । पछिल्लो समय सोसल मिडियामा एउटा भिजिटिङ कार्ड चर्चाको विषय बनिरहेको छ । भारतका एक अवकाशप्राप्त कर्मचारीको भिजिटिङ कार्डले ट्वीटरमा राम्रै चर्चा कमाइरहेको छ । @PedestrianPoet नामक ट्विटर ह्याण्डिलबाट एक अनौठो भिजिटिङ कार्डको तस्वीर शेयर गरियो । सामान्यतः भिजिटिङ कार्डमा व्यक्तिको नाम, काम गर्ने कम्पनी, पद,
Jun62018 by सदरलाइन संवाददाताNo Comments
विश्वको अनौठो बैंक जहाँ पैसा होइन, प्रेम कहानी जम्मा गरिन्छ
प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ २३, २०७५ |
बैंकको कुरा गर्ने बित्तिकै मनमा पैसाको हिसाबकिताब शुरु हुन्छ । तर आज हामी यस्तो बैंकको कुरा गर्दैछौँ जसमा पैसा होइन, प्रेमकथा जम्मा गरिन्छ । यो बैंकको नाम नै लभ बैंक हो । हरेक वर्ष भ्यालेन्टाइन डे को अवसरमा त्यहाँ विशेष प्रदर्शनीको अयोजना गरिन्छ । त्यसबेला बैंकमा निकै भिडभाड हुन्छ । सबै प्रेमजोडीहरु आफ्नो प्रेमको कहानी लेखेर त्यहाँ जम्मा गर्दछन् । यस्तो लभ बैंक स्लोभाकियाको बन्स्का स्टिभनिका स
Feb72018 by सदरलाइन संवाददाताNo Comments
एक सय पच्चीस रुपैयाँमा घर ! किन्ने हो ?
प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ २४, २०७४ |
एउटा घरको मूल्य कति पर्ला ? त्यो पनि सुन्दर सहरमा रहेका घरहरु । अवश्य पनि निकै नै महंगो पर्नुपर्ने हो । लाख तथा करोडको भाउमा । तर यो दुनियाँमा यस्तो सहर पनि छ, जहाँ लाख तथा करोड होइन, जम्मा १ सय २५ रुपैयाँमा घर किन्न पाइन्छ । पत्याउनुभएन ? पत्याउनुस् पनि कसरी ? हाम्रो देशका सहरमा सुनको भाउमा घरजग्गा बिकिरहेका छन् । तर, उता इटालीमा भने सरकारले एक युरो अर्थात् झण्डै एक सय २५ रुपैयाँमा घर बेचिरहेक
Dec192017 by SadarlineNo Comments
एजेन्सी / नेपालगन्ज एउटा समान किन्दा अर्को समान सित्तैमा पाउने कुरा त सुनिएकै हो तर, घर किन्दा श्रीमती सित्तैमा पाईने कुराले भने सबैलाई अचम्मै तुल्याएको छ । आफ्नो व्यापार प्रवर्धनका गर्नका लागि व्यापारीले अथवा कर्पोरेट हाउसले विभिन्न खालका आर्कषक अफरहरु ल्याउने कुरा सर्व विधितै छ । तर, एउटा यस्तो अनौठो अफर घर किन्दा श्रीमती सित्तैमा दिने अफर सार्वजनिक भएको छ । इण्डोनेसियामा घर किन्दा श्रीमती
Apr132017 by SadarlineNo Comments
प्रकाशित मितिः बिहिबार, चैत्र ३१, २०७३ |
विरेन्द्र कर्ण/रासस ३१ चैत, सिरहा : सौन्दर्यको प्रतीक फूल मन नपराउने को होला ? त्यसमा पनि वर्षको एक दिन मात्र फुल्ने त्यो फूल जसलाई श्रद्धा र भक्तिले हेर्ने गरिन्छ । त्यो फूल हेर्न कौतुहलताका साथ आउने आगन्तुकमा नेपालको मात्र नभई छिमेकी मूलुक भारतबाट आउनेको सङ्ख्या लाखौँमा रहेको छ । इसाको छैटाँै सातौँ शताब्दीदेखि फुल्दै आएको त्यो चमत्कारी फूल वैशाख १ गतेका दिन बिहानीपख फुल्नु र साँझपख मौल
Aug22016 by SadarlineNo Comments
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन १८, २०७३ |
सदरलाइनडटकम १८ साउन, प्यूठान : प्यूठान ओखरकोटका एक किसानले बाँदरले दुःख दिएको भन्दै गाविसको कार्यालयमा राहत माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । ओखरकोट–५ का अनन्तप्रसाद पोख्रेलले साउन १० गतेका दिन बाँदरको एक हुलले आफ्नो ३ रोपनीको मकैबाली नष्ट गरेकोे भन्दै राहतको माग गरेका हुन् । उनले अवस्थाको निरीक्षण गरी राहत दिन माग गरेका छन् । उनले गाविसमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘म ओखरकोट गाविस–५ बस्ने अनन्त राज पो
Jul42016 by SadarlineNo Comments
प्रकाशित मितिः सोमवार, असार २०, २०७३ |
सदरलाइनडटकम : गाईको गहुँत पवित्र मानिन्छ र हिन्दु धर्मका देव तथा पितृ कार्यहरुमा गौमूत्रको ठूलो महत्व छ । हुनत विज्ञानले समेत गहुँतको सेवनले मानिसका विभिन्न रोगहरु निको हुने भएकाले गहुँतलाई औषधि नै मानेको छ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिएको गाईको गहुँत हुँदा हुँदा आर्थिक रुपमा पनि बहुमुल्य बनेको छ । किनकी गाईको पिसाबमा सुन भेटिएको छ । भारतको गुजराँतको जूनागढ कृषि विश्वविद्यालयका
सदरलाइनडटकम :दुनियामा कतिपय यस्ता अनौठो परम्पराहरु छन् जसका बारेमा सुन्दैमा जिउ सिरिंग हुन्छ । मान्छे मरिसकेपछि गरिने अन्तिम संस्कार (दाह संस्कार)का परम्पराहरु क्तिपय यस्ता छन् की विश्वासै गर्न गाह्रो हुन्छ । कही मान्छेको लासलाई खुल्ला ठाउँमा फ्याँकिन्छ भने कतै लासलाई काटेर गिद्धलाई खुवाइन्छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बस्ने डोल्पो जातिका साथै तिब्बत, चीनको किंघाइ तथा मंगोलियामा समेत कतिपय सम
सदरलाइनडटकम : उमेर जम्मा १० वर्ष तर जिउको वजन १ सय ९२ किलो । हो, इण्डोनेसियामा बस्ने आर्य परमाना नामका बालक विश्वका सबैभन्दा मोटा बालक हुन् । उनको जिउ मोटाउने क्रम अझैपनि तिब्र ग तिमा बढिरहेको छ । इण्डोनेसियाको पश्चिमी जाभास्थित चिपुरवासारी गाउँमा बस्ने आर्यका मोटोपनालाई देखेर उनका बुवाआमा निकै चिन्तित बन्न थालेका छन् । उनको जिउको तौल यसरी बढिरहेको छ की मोटाइले ज्यानै जाने डरले उनका बाउआम